Umthandazo kuSathana. ? Ngothando, Lawula uMntu omnye neMali
Umthandazo kuSathana. Kuyo yonke imithandazo ekhoyo, sinokuthi umthandazo kuSatana Kubaliwe, kwabaninzi, njengenye yeyona nto ingaqhelekanga ikhoyo kwaye yiyo loo nto abantu beziva ubuvila bokubhekisa kulo mthandazo kodwa inyani kukuba akukho mthandazo unokuba mbi kuba zizenzo zokomoya ezilula ezenziwa ngokusuka entliziyweni nanjenge Indlela yokuphuma kwiimeko ezinokuthi, ngokweendlela zethu, zinokuba nzima ukufezekiswa.
USathana unxulunyaniswa nobumnyama, kunye namandla amnyama okanye ngqo nobubi.
Konke oku kuyinxalenye yehlabathi lokomoya elikhoyo kwaye kufuneka sibe nolwazi kuba luyinyani elingenakuphuncuka kuyo.
1 Umthandazo kuSathana. Ngubani uSathana?
2 1) Umthandazo kuSathana wothando kwaye ulawule umntu
3 2) Umthandazo kuSathana ucele ubabalwe
4 3) Umthandazo kuSathana ukutsala othandekayo
5 4) Umthandazo wokucela ukuba uSathana abe nemali
5.1 Ngaba umthandazo ungandenzakalisa?
Umthandazo kuSathana. Ngubani uSathana?
Sinokufumana ibali lakhe kwilizwi likaThixo apho kusithiwa yingelosi evela ezulwini, ngokukodwa lowo wajongana nenkolo kaThixo, unamandla kwaye umdali wazo zonke izinto.
Ibali lixela ukuba uLuzibheli, igama lakhe kwasekuqaleni, wayegcwele ikratshi kwaye waqala wanqwenela ukuba lonke unqulo olwenziwa ezulwini lwalungenzelwe yena. Ngenxa yokugqibela kuyakholelwa ukuba wayeyingelosi yimbonakalo entle.
Yonke le nto yaqala idabi emazulwini apho USathana wajika wakhutshelwa ngaphandle kunye needemon owagqala ukuba ulungile kwaye ukusukela ngoko unxulumana nehlabathi lobumnyama.
USathana ngumntu owadalwa nguThixo ozaliswe ziimvakalelo ezingathandekiyo kwaye kungenxa yeso sizathu sokuba afumane isohlwayo.
1) Umthandazo kuSathana wothando kwaye ulawule umntu
"Juste amancebo, amancibo, njengokuba wawumamisile umfana ndifuna ukuba undithande (yatsho igama lomntu)Musa ukuyishiya isitulo, ebhedini, okanye nomfazi, ongenalo ixesha lokuthula!
Lusifa, Lusifa, kanye njengokuba ugxothe imiphefumlo engamawaka amane esihogweni, ndifuna undikhokelele (utsho igama lomntu), ukuba ulele, ungamshiyi ezolile, ibhedi yakhe imzalisa ngethumbu kunye nomqamelo wakhe uzalisa ngamatye kaLusifa, hayi yiyeke yodwa!
Ngomsila kaMtyholi okona kudala, kukho into endifuna uyibambe kum (utsho igama lomntu); kwiintlanganiso ezithuleyo andinazo, kude kube kuko oko kum ngokupheleleyo.
Thandaza umthandazo kuSathana wokuba ulawule umntu onokholo olukhulu.
Uthando lubaluleke kakhulu ebantwini kwaye yiyo loo nto ngalo mthandazo ungqalileyo sinokufumana uncedo olufunekayo lokulufumana okanye ukufumana naluphi na uhlobo loncedo ukuze uthando lungasuki ecaleni kwethu nangaliphi na ixesha.
Iinjongo ezide zeentsuku ezisixhenxe okanye ezisithoba zinokwenziwa kwaye nokuba ziphakamise isibingelelo esikhethekileyo okanye zinike umnikelo, kodwa konke oku kufuneka kwenziwe ngokholo entliziyweni.
2) Umthandazo kuSathana ucele ubabalwe
“Umphathi wokukhanya, obona bulumko nobuhle ngeeNgelosi, ezazicinezelwe nguThixo.
Owu, sithunywa sokuthinjwa, osokolayo kokungalungisi! Kwaye oko, iphelelwe lixesha, uyayihlaziya amandla kunye nethemba ledolophu elahlekileyo engenalo ulwalathiso olufanelekileyo. Xolela bonke abo bantu bathi egameni likaThixo benze izono ezothusayo, yingelosi enkulu siyakhulula kuhanahaniso.
Owu, wena owazi konke, iNgelosi enkulu uLusifa, othi ebomini ayinike iThemba kwaye uyakuqonda ukungabikho kokusesikweni kukaThixo.
Wena ungoyena mntu ubalaseleyo ulwe nengcinezelo ukuze asikhulule kulwazi nenkululeko imelwa bubomi.
Akukho namnye umntu oyiqondayo intlungu yabantu ukuba yingelosi ewile ethwala isohlwayo sekhoboka elikhulu.
Sikhulule ebubini, usikhulule kwingcinezelo kwaye usinike inkululeko oyinike idabi elinobulungisa egameni lomntu kunye nendalo.
Ngubani ongaguquli kwisihlalo sokugweba abaphilayo nabafileyo, sikhokele phantsi kweembono zokuziphatha ezinjengezakho, babe ngamadoda alungileyo kunye nobulungisa abanokuthwala ukukhanya okunikezelayo.
Ungalibali ngathi izidalwa zabantu ukuba sinombulelo kuwe, sikuwe, Ingelosi enkulu.
Wena ngolwazi lwakho olukhulu ubonise ubutyebi bomthwali omkhulu wokukhanya kunye nokuqonda, ungasishiyi ngenceba yobukhoboka kunye nokungekho sikweni usinike ulwazi ukuze sikwazi ukuzikhulula kumakhamandela acinezelayo awasinikwa nguThixo asinyanzela ukuba siwuthwale.
Ndiyabulela kuwe ngonaphakade ozisa uKhanyo kuLusifa.
Akukho nto ilunge ngakumbi kunemithandazo yokucela umntu owafikelela kwihlabathi lokomoya ukuba akholwe kwaye kuloSathana unethuba.
Lo mthandazo inokwenziwa nangaliphi na ixesha oko kuyimfuneko kungakhathaliseki ukuba kwenzeka ntoni na okusingqongileyo kuba kusisenzo sokomoya kuphela apho, ukuba siyathanda, sinokusebenzisa kuphela amandla ethu. engqondweni.
3) Umthandazo kuSathana ukutsala othandekayo
“NjengoKayafa, usathana, uFierabrás kunye nomphathi wesihogo olawula wonke umntu, ophethe (igama lomntu oza kubopha) ndizise laa gusha, livalelwe phantsi kwenyawo lasekhohlo.
(Igama lomntu oza kubopha) Imali esesandleni sakho kunye nasesandleni sam ayizukusweleka, ndinxaniwe nam okanye andizukuphela, umpu kunye nommisimbe azisoze zisihlukumeze, iintshaba zam ngeke zikwazi ukuba ngu-columben mna. yebhokhwe emnyama engummangaliso.
(Igama lomntu oza kubopha) ngambini ndiyakubona, ngezintathu ndiyakubamba. Ndikunye noKayafa, uSathana, uFierabrás. "
Ngala maxesha xa umntu esimthandayo sele esukile kude kuthi, xa umgama okanye iingxaki zisigcina sihlukile kulowo mntu uye waba luthando lwethu, ke singaphakamisa lo mthandazo ukhethekileyo ukwenza olo thando lubuyela kuthi ngalo mzuzu. Sinqwenela.
4) Umthandazo wokucela ukuba uSathana abe nemali
Inamandla kunye neNgelosi eNkulu emnyama, izaliswe bubulumko kwaye uyayazi into oyifunayo.
Ndicela ukuba undixelele namhlanje kwaye ugcwalise ubomi bam ngemali, ndinqwenela ukuba iimvula zibekho phambi kwam.
Uyayazi ukuba kunjani ukuhlupheka ngenxa yabanye, ngenxa yoko ndiye ndive kuba imali ihambisa yonke into.
Ndinike lo mnqweno mkhulu kwaye ndiza kukulandela ukuya esiphelweni sehlabathi ukuba uyandicela, ndiya kuba nawe.
Ndizokulandela amanyathelo akho nomendo wakho kuba ndiyazi ukuba imali ayisoze yashiywa ngakweli lakho kwaye ndiza kuba sisityebi.
Ndiyazi zininzi iindlela ezivaliweyo kum kwaye andinakukwazi ukuzivula kodwa ndicela uchume.
Gcwalisa umzi wam ngemali eninzi ukuze abantwana bam baphile njengookumkani phantsi kwamandla akho.
Sonke siyakulandela umendo wakho kuba yindlela yokuphumelela kwaye yile nto siyifunayo.
Siyakucela ukuba usivumele ukuba ube secaleni kwakho kwaye ungaze ujike kuba unguKumkani wethu odumileyo uSathana
Imali sesinye sezizathu ezikhulu zokuxhalaba kwabemi abakhoyo kwihlabathi liphela kuba kufuneka sazi ukuba phantse yonke into ithengiwe ngemali.
Ngamaxesha apho Sijongene namaxesha anzima kwezoqoqosho, ukuphakamisa umthandazo sicela imali yokufikelela kwizandla zethu inokuba sisisongelo sokomoya esifunekayo ukuze ubone ummangaliso wezezimali esiwudingayo.
Singacela imali, ukuze ifikelele ezandleni zethu, ukuze sibe nokucacisa ngexesha lokwenza uthethathethwano okanye ukuze ithamsanqa lisecaleni lethu kwaye singayifumana nokuba kunjalo, yonke le mithandazo isebenza.
Ngaba umthandazo ungandenzakalisa?
Hayi, i imithandazo ngaphandle kwabo abanakusenzakalisa.
Nangona kunjalo, kufanelekile ukukhankanya ukuba ezi zinto mazenziwe ngobunzulu kunye noxanduva ngokupheleleyo kuba into oyicelayo inokumenzakalisa omnye umntu kwaye ngale ndlela kufanele ukuba sikulumkele kakhulu ukusenzakalisa kuye nabani na ngezicelo zethu.
Kufuneka sinexhala malunga nokwazi ukuba singacela njani kwaye sizomeleze ukuba samkele intando kaThixo kwaye singenzi imithandazo engenabuntu okanye yokuzingca.
Yenza okungakumbi Amandla omthandazo wokubhengeza uSathana.
Imithandazo emi-4 eya kwi-Saint Cyprian
izigaba Injongo Ukuhamba kwetikiti